🥇 Inkqubo yezemidlalo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 92
Ividiyo yenkqubo yezemidlalo
Uku-odola inkqubo yezemidlalo
Imidlalo iya kuhlala ihambelana, kuba yenye yeendlela eziphambili zokuba sempilweni kwaye sonwabe. Kuya kufaneleka ngakumbi, xa uninzi lwabantu ngoku lusebenza luhleli kwiikhompyuter zazo. Ukuphumla ngokusebenzisa uhlobo olwahlukileyo lomsebenzi yinto eqhelekileyo evumela umzimba ukuba uphinde uchache kwaye inceda ukungena kwiingcinga ezifanelekileyo. Ukuqinisekisa ukuba imisebenzi yezemidlalo ihleliwe kwaye ihlala ihleli kwaye ikhokelela kwiziphumo ezilungileyo, amacandelo ahlukeneyo, iiklabhu zemidlalo, indawo yokuzivocavoca, iiphuli zokudada, amaziko eyoga kunye nezitudiyo zomdaniso ziyavulwa yonke indawo. Nabani na angafumana umsebenzi oza kutyhila iitalente zakhe. Kwezi ndawo abaqeqeshi abanamava bakuxelela ukuba kubaluleke kangakanani ukucwangciswa kwemidlalo kwaye banika iingcebiso ngendlela yokulungelelanisa umsebenzi wakho ngeyona ndlela ilungileyo ngokukodwa. Ngokwesiqhelo ngexesha lokuqala emva kokuvulwa kwamaziko ezemidlalo, awakhathali kangako malunga neendlela kunye nezixhobo zokugcina irekhodi kunye nolawulo. Inkqubo iqhubekile kwaye ithembekile.
Nangona kunjalo, unyaka okanye emibini kamva, xa ukuhamba kwabaxumi kukhula kakhulu kangangokuba abasebenzi bombutho bengasakwazi ukumelana nemfuno yokuqhubekeka kwenani lolwazi olukhulayo, abaphathi baqala ukucinga malunga nokwenza imisebenzi yeshishini kunye nolawulo lweziko lezemidlalo. . Ngamanye amaxesha, ngohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, bazama ukukhuphela iinkqubo zemidlalo zasimahla kwi-Intanethi ukulawula amashishini abo. Ixesha liyadlula kwaye kuyacaca ukuba inkqubo yezemidlalo yasimahla ayihlangabezani nolindelo. Ngamanye amaxesha kunokukhokelela ekulahlekelweni kwedatha yonke emva kokusilela kwenkqubo yezemidlalo yasimahla. Kuya kufuneka uyazi ukuba inkqubo esemgangathweni yokulawula iklabhu ayihlawulelwa. Emva koko, ukukhangela inkqubo efanelekileyo yezemidlalo kuqala. Eyona mfuno iphambili, edla ngokwenziwa kwinkqubo enjalo, ngumlinganiso ofanelekileyo wexabiso kunye nomgangatho, kunye nokulula kokuyiqonda. Ngendlela, le nkqubo izuze ukuthembela kumashishini amaninzi kwihlabathi liphela.
Inkqubo yobalo lwemidlalo esemgangathweni kufuneka ikwazi ukugcina idatha ixesha elide, kunye nokwenza ugcino lwenkqubo ukuze idatha ifumaneke ngokulula xa kukho imfuneko. Zonke ezi mpawu zaphuhliswa ziingcali zethu ngelixa kwakusenziwa inkqubo ye-USU-Soft yezemidlalo. Kukulula konxibelelwano kunye nokuthembeka okwenza umahluko ophambili kwii-analogue zawo. Oku kuvumela inkqubo yezemidlalo ukuba ilawule imisebenzi yenkampani yakho kwaye ikuncede ufumane isikhundla esiphambili kwintengiso yelizwe lakho nakwamanye amazwe kude kuphela kwiminyaka embalwa. Inkqubo ye-USU-Soft inokubanakho ukulungelelaniswa kuzo naziphi na iimfuno kunye nolwakhiwo lwenkampani yakho.
Umsebenzi womzimba yinto eqhelekileyo, ehambelana nazo zonke izinto eziphilayo, kubandakanya nabantu. Sidalelwe ukuthathela ingqalelo into yokuba siza kubaleka kakhulu, sihamba kwaye sizama ukuhlala siphila. Kwihlabathi lanamhlanje, oku kuye kwaba yimfuneko ngokupheleleyo. Abantu abaninzi basebenza imini yonke eofisini phambi kweekhompyuter zabo. Bachitha iiyure ezininzi bekwindawo enye, amaxesha amaninzi besenza umsebenzi odinisayo. Ikhokelela phi le nto? Kwiingxaki zempilo: umbono, amalungu, ukujikeleza kwegazi, njl. Ngethamsanqa, kulula kakhulu ukusombulula ingxaki - kwanele ukuya kwiklabhu yokomelela komzimba izihlandlo ezininzi ngeveki (kwaye kufanelekile - ukwenza imisebenzi yomzimba yonke imihla) ukulibala malunga iingxaki zempilo ngonaphakade. Kwishishini lezemidlalo langoku unokufumana iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi yomzimba - ukubaleka, ukuqubha, ukulwa, ukwakha umzimba kunye nokunye okuninzi. Unokukhetha ezona zilungele wena. Okanye mhlawumbi ufuna ezininzi ngaxeshanye? Akukho ngxaki kwinkqubo yethu! Oku kuphakamisa ukuba ibango lezemidlalo liya kwanda kuphela. Kwixesha elizayo, kuyakubakho ukwanda komsebenzi ofuna ukuba notyekelo lwengqondo, okuthetha ukuba abantu abaninzi kuya kufuneka batyelele ii-gyms emva kosuku lonke lokusebenza nentloko.
Kwaye ukuba usenamathandabuzo malunga nenkqubo, sicebisa ukuba undwendwele iwebhusayithi yethu esemthethweni, apho uya kufumana lonke ulwazi onomdla kulo, qhelana nohlobo lwedemo lwasimahla lwenkqubo yezemidlalo kwaye uyikhuphele ukuze ubone kwaye uvavanye yonke ukusebenza okulungeleyo ukubonelela. Kananjalo nxibelelana neengcali zethu, ezonwabileyo ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Zininzi izinto zokuzonwabisa kwihlabathi liphela. Abanye abantu banomdla wokuzilolonga ngokwasemzimbeni kwaye bakwenza umdlalo wabo ukwenza umdlalo nanini na benakho. Nangona kunjalo, kukho uhlobo olunye lwezemidlalo oluthandwa ngumntu wonke! Zizifundo zeqela, xa kukho iqela elipheleleyo leendwendwe elinenjongo enye-yokwenza imidlalo-kwaye abakonwabela ngokwenene ukuba kweli qela kwaye banxibelelana nawe. Esi sesinye sezizathu eziphambili ezenza ukuba abathengi beze kula maziko. Abazisi kuphela izibonelelo kubo kukhuphiswano lwempilo kunye nobungqingqwa, kodwa bachitha ixesha bejikelezwe ngabantu abanezimvo ezifanayo. Le yindlela yokudibana nabahlobo abatsha abanomdla, kunye nokwabelana kunye nokuxoxa ngeendaba.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba aba ngabona baxhamli banomdla kumaziko ezemidlalo, njengoko ingabo bahlala bethenga amakhadi obulungu bejimu kwaye babe ngabathengi bakho abaqhelekileyo. Kutheni le nto kubaluleke kakhulu kumphathi wombutho wezemidlalo? Abathengi abaqhelekileyo ngumba ophambili wabathengi bombutho. Baxelwa kwangaphambili kwaye bavumela indawo yezemidlalo ukuba ivavanye amandla amagumbi oqeqesho ukuthintela ukunqongophala kwendawo. Inkqubo ye-USU-Soft iya kunceda ukulawula ulwazi kwaye ulusebenzisele inzuzo yakho!